खानेपानीको धारामा हावा मात्र - Saptakoshionline
खानेपानीको धारामा हावा मात्र
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ११, २०७५ समय: ८:५९:१२
मोरङको केराबारी गाउँपालिकाद्धारा आयोजित सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सोमवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका धेरै वडामा खानेपानीको समस्याले गाउँमा हाहाकार निम्त्याएको नागरिकले आवाज उठाएका छन् ।
केराबारीको वडा नं. ६,७ र १० नम्वर वडामा खानेपानीको समस्याले वडावासीहरु व्याकुल बनेको गुनाशो सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै केवलप्रसाद सुवेदीले खानेपानीको धारामा हावामा आउने गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी केराबारी ६ को धारामा भने हावा समेत नआउने गरेको त्यहाँका नागरिकहरुले कार्यक्रममा गुनाशो पोखेका छन् । त्यसैगरी वडा नं. ७ मा पनि खानेपानीको चरम समस्याका कारण स्थानीय वासिन्दा र गाईवस्तुहरु पालनमा समेत समस्या परेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले सवाल उठाएका थिए ।
त्यसैगरी खोला तटवन्धको समस्याले पनि केराबारीवासीलाई सताएको गुनाशो राखेका थिए । केराबारी ९ मा भलुवा,तुर्के र लोहोन्द्रा खोलाले सताएको र उता मुगुखोलाले बस्तीमा समस्या पारेको विषयमा किन अहिले सम्म जनप्रतिनिधिहरुले कामगर्न ढिलाई गरेको भनि प्रश्न गरेका थिए । केराबारी ९ का यज्ञ सुवेदीले गाउपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीलाई प्रश्न गर्दै चुनाव ताका खोलाको पाता फर्काउछु भन्नु भाथ्यो त्यो कहाँ सम्म पुग्यो भनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको प्रस्तावित संग्राहलयको विषयमा गाउँपालिकाको नीति र कार्यक्रमले समेट्न नसकेको गुनाशो पनि व्यक्त गरिएको थियो । महासंघ केराबारीका सचिव तिलक देवानले आर्यघाट निर्माणमा रकम दिन मिल्ने सिंहदेवीमा बन्न लागेको संग्राहलयमा रकम दिन किन नमिल्ने भनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसैगरी महासंघ की अध्यक्ष सुभद्रा राईले आदिवासीहरुको भाषामा पठनपाठनका लागि बजेट विनियोजित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाबाट परेको योजनाको काम गर्न उपभोक्ताहरुले पहिले पैसा लगाउनु पर्दा समितिमा बस्नेलाई मार्कामा परेको केराबारीका प्रेम लिम्वु लावतीले उठाएका थिए । त्यसैगरी योजना फरफराकका लागि कार्यालयबाट असाध्यै ढिलो हुने लेखाबाट दुख दिने गरेको जस्ता विषयहरु सेवाग्राहीहरुले उठाएका थिए । त्यसैगरी खदम खोलाको उत्खनन्को विषयमा पनि स्थानीय वासिन्दाहरुले समस्या राखेका थिए । खदम खोला मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरेका कारण हात्ती डुब्ने खाल्डाहरुका कारण सिचाईमा समस्या परेको समस्या राखेका थिए ।
नागरिकहरुले उठाएका सवाल मागहरुलाई क्रमिक रुपमा सम्वोधन गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्की लगायत वडाध्यक्षहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले खानेपानीको वृहत योजना ल्याएर क्रमिक रुपमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।